Shabaab oo shaaciyey halka ay kasoo jeedaan dagaalamayaashii weeraray xarunta Turkiga ee Muqdisho. | Salaan Media
Shabaab oo shaaciyey halka ay kasoo jeedaan dagaalamayaashii weeraray xarunta Turkiga ee Muqdisho.
Xassan Yacquub Cali, gudoomiyada Shabaab ee gobalka Gal-guduud ayaa waxa uu maalintii shalay aheyd daaha ka rogay halka ay kasoo jeedaan deegaan ahaan dagaalamayaashii dhawaan isku qarxiyay xarun Turkigu ay kulahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Wadaadka asal ahaan kasoo jeeda koofurta Soomaaliya ayaa waxa uu dad uu ku dujiyay salaada ciida barxad ku taalla degmada Ceelbuur u sheegay in dagaalamayaashaasi ay ahaayeen kuwa kasoo jeeda Gal-guduud arintaasi oo aheyd mid madaxda Shabaabku wali aysan ka hadlin.
Xassan Yacquub ayaa waxa ay inoqonaysaa iyada oo Shabaab ay sheegteen masuuliyada weerar is-miidaamin iyo dagaal toos ah oo lagu qaaday xarunta Turkigu ay ku lahaayeen agagaarka dugi sare Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Si kastaba, Hadalka Xassan Yacquub ayaa waxaa dad badani u fasirteen mid uu ku doonaayo in uu iska hor-keeno shacabka gobolkaasi iyo qolyaha amaanka ku shaqada leh si loo colaadiyo dadka deegaanaka Galguduud ka yimaada ee kusoo hirta deegaanada ay dowladu gacanta ku heyso.